Semalt विशेषज्ञ: एसईओले ई-कमर्स वेबसाइट चलाउँदा मानिसहरू के गर्छन् गल्ती गर्दछ
ई-वाणिज्य एसईओ एक सुन खानी हुन सक्छ विशेष गरी उनीहरूलाई जो यो कसरी सही गर्ने भनेर जान्दछन्। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले तपाईंलाई एसईओ सिकाउँछन् भनेर दावी गर्दछन्, तर यो प्राय जसो भ्रमपूर्ण जानकारीको साथ समाप्त हुन्छ।
Semalt डिजिटल सेवाहरु का विशेषज्ञ जेसन Adler धेरै सामान्य गलत धारणाहरु को बर्णन गर्दछ जसले ई-वाणिज्य व्यवसाय को लागी SEO चलाउने मानिसहरूलाई बहकाउछ ।
१. SEO सबै चीज ठीक गर्न सक्दछ।
वास्तवमा, एसईओको बिक्रीमा प्रभाव छ, तर अन्य मार्केटिंग च्यानलहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। सँगैको लागि बिक्री ड्राइभिंग गर्दा, धेरै कारकहरू विचार गर्न आवश्यक पर्दछ, केवल वेबसाइटको श्रेणीकरण मात्र गर्दैन। एसईओ बिक्री को वृद्धि, तर उत्पाद वितरण पनि प्रतिस्पर्धी हुनु पर्छ। प्रतिस्पर्धामा अन्य कारकहरू उत्पादन प्रस्ताव, बिक्री, उपयोगिता, मूल्य निर्धारण, र अधिक धेरै समावेश हुन सक्छ। केवल प्राविधिक SEO मा फोकस गर्दा सजिलै तपाइँलाई बहकाउन सक्छ।
२. श्रेणी पृष्ठहरू फरक पर्दैन
कोटी पृष्ठहरू थप कुञ्जी शब्दहरू थप्नका लागि प्लेटफर्महरू हुन्। Semalt वेबसाइट विश्लेषक जस्तै उपकरण प्रयोग गरेर, तपाईं लामो पुच्छर कुञ्जी शव्दहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईं आफ्नो कोटीहरूमा समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। WebCrawler को लागि यी कोटीहरूको अनुक्रमणिकामा मेटा शीर्षक, H1 ट्याग, मेटा विवरण, URL, र तपाईंको शरीर सामग्री (यदि त्यहाँ एक हो) अनुकूलन गर्न सधैं सिफारिस गरिन्छ।
External. बाह्य वेबसाइटहरुबाट सामग्री नक्कल गलत छ
तपाईंको साइटमा पुन: प्रयोजित सामग्री प्राप्त गर्नु राम्रो निर्णय हुन सक्छ। यद्यपि तपाई ब्याकलिks्क लिन पनि राम्रो हुनुपर्छ। उदाहरण को लागी, अमेजनले शीर्ष रैंकिंगमा पुग्नको लागि तिनीहरूको साइट विवरण पुनः प्रयोग गरेर ठूलो लाभ कमाउँछ। उनीहरूसँग कडा ब्याकलिinking्क गर्ने रणनीति छ।
'. 'एक आकार सबै फिट हुन्छ' खोजी ईन्टेन्ट पूर्वानुमान
ब्लगरको लागि कहिले पनि झर्नु हुँदैन जसले वर्ग पृष्ठहरू आगन्तुकहरूको लागि प्रलोभनको रूपमा प्रयोग गर्दछ। व्यक्ति मुख्यतया दुई कारणका लागि इन्टरनेट सर्फ गर्छन्। पहिलो एक शोध गर्दैछ। एक बजार जान्न को लागी कोशिश गरीरहेको हुन सक्छ वा केहि को बारे मा निश्चित जानकारी स gather्कलन। यस व्यक्तिलाई केवल जानकारीको आवश्यकता छ र त्यो विशेष अवस्थामा तपाईंको बिक्री ड्राइभ गर्ने छैन। दोस्रो कारण खरीद गर्न सम्बन्धित छ। कोही उत्पादन किन्न तयार हुन सक्छन्। यस्ता प्रकारका आगन्तुकहरू उत्पादन र कोटी पृष्ठहरूमा निर्देशित गरिनु पर्दछ जुन बिक्रीको लागि उपयुक्त छ। प्रलोभन र स्विच टेक्निकले असफल दिशाहरूको कारण इच्छुक खरीददार हराउन सक्छ।
Reviews. समीक्षाले SEO लाई मद्दत गर्दैन
पूनरावलोकनहरू खोज ईन्जिनहरूमा उच्च श्रेणीकरण गर्ने एक तरीका हो। यसका साथै समीक्षाले तपाईंको वेबसाइटमा ग्राहकहरूको विश्वास र विश्वास बढाउँदछ। धेरै खरीददारहरू खरीद गर्नु अघि समीक्षाहरू पढ्दछन्। एक राम्रो समीक्षा रणनीति, गुगल द्वारा अनुक्रमित, निश्चित रूप मा तपाइँको एसईओ प्रयास को बधाई हुनेछ। समीक्षाले तपाईंको वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताको संलग्नता समय बढाउँदछ। अमेजन उत्पादन समीक्षा पाउनमा राम्रो छ, जसले उनीहरूलाई धेरै बिक्रीहरू बनाउँदछ।
ई-वाणिज्य एक प्राविधिक क्षेत्र हो जुन धेरै गलत धारणाहरूले भरिएको छ। व्यक्तिहरू एसईओ जस्ता इन्टरनेट मार्केटिंगको पक्षहरूमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुन्छन् तर अन्य डिजिटल मार्केटि techniques टेकनिक्सको काम गर्न सक्दैनन् जुन काम गर्दछन्। माथी सूचीबद्ध सुझावहरु को रेखाचित्र मा, तपाईं एक तथ्य अनुसरण गर्न वा बेवास्ता गर्न एक गलत धारणा बीच भिन्नता बनाउन सक्नुहुन्छ। जे भए पनि, इन्टरनेट मार्केटिंग अभियानको समग्र लक्ष्य सामान्यतया बढ्दो नेतृत्व र अन्तत: रूपान्तरण हो।